JOOGTADA - MAKEFOOD INTERNATIONAL CO., LTD
Kalluun Pre-shiilan & La dubay
Waxaan kala-duwaynaynaa alaabteenna si aan u daboosho baahiyaha suuqa.
Samee Cunto Joogtayn ah
Joogtaynta silsilad sahay ah oo noo socota ayaa muhiimad weyn u leh guusha joogtada ah ee ganacsigeenna iyo guud ahaan warshadaha.
Anaga oo ka mid ah ganacsatada badda ka ganacsata adduunka, waxaan dan gaar ah ka leenahay caafimaadka muddada dheer ee Baddeena. In badan oo ka mid ah cunnada badda waa duurjoog-qabasho taas oo u horseedi karta kalluumeysi xad-dhaaf ah, qabatin aan loo baahnayn, iyo qaabab qabasho burbur. Ficilkeena, waxaan ubaahanahay inaan hubino inaan ilaalino deegaanka badda iyo waliba bulshadaas ku tiirsan goynta kheyraadkeeda, jiilalka soo socda.
Ballan qaadkeena ku aaddan jiritaanka badda ayaa ah mid muddo dheer soconaya maadaama aan aqoonsannahay inaysan jirin wax dhaqso ah oo lagu xalliyo. Waxaan taageernaa kalluumeysigaas mas'uulka ka ah, ku dhaqanka kalluumeysiga waara ee udub dhexaad u ah wax kasta oo ay qabtaan.
Waxaan qaadaneynaa aragtida ah inaan ubaahanahay inaan ka shaqeyno warshadaha si aan u hagno oo aan saameyn ugu yeelano, si aan ugu soo jiidanno macaamiisheenna iyo alaab-qeybiyeyaasha qaabab waara oo waara oo qabasho iyo soo-saar.
Waxaan taageernaa shaqada dhowr hay'adood oo aan dowli ahayn sida MSC (Golaha Maamulka Marinada Marinada) iyo Alaska RFM (Maaraynta Kalluumeysiga Mas'uul ka ah) kuwaas oo dejiyay heerar warshadeed sare si loo hubiyo saameynta ugu yar ee deegaanka ee Kalluumeysigeenna Caalamiga ah.
Mabaadi'deenu waxay ina farayaan inaan:
Raadi aqoonsi madax-bannaan oo dhinac saddexaad ah meel kasta oo suurtagal ah waxaadna doorbidaa alaab-qeybiyeyaasha la aqoonsan yahay.
Waxaan dalbaneynaa inaan ogaanno ilaha iyo asalka alaabooyinka aan iibinno waxaanan iskudayeynaa inaanu soo gaabiyo silsiladda sahayda meelkasta oo suurtagal ah.
Marnaba kama ogaanno inaan iibinno alaabooyinka waxyeelleeya deegaanka ama khatar u ah jiritaanka noolaha iyada oo aan la qorsheynin in la saxo aqoonsiga jiritaanka sheyga.
Waxaan u jiidaneynaa macaamiisheenna iyo alaab-qeybiyeyaasha si aan u sameyno xulashooyin waara oo sii socda.
Waxaan ku guuleysanay soo saarida baakadeena cusub ee lagu nafaqeyn karo alaabteena badda ee barafoobay sanadka 2020. Rabitaan ah in saameyn la yeesho oo la abuuro dhaqdhaqaaq ayaa horseeday isbeddelka Makefood ee isticmaalka baakadaha la bacrimin karo. Marka tan la sameeyo waxaan rajeyneynaa inaan sameyno macaamilka, si miyir leh uga fikirno saameynta baakadaha caagga ah ee aan dib loo isticmaali karin ay ku leedahay deegaanka; isla markaana waxaan kor ugu qaadi karnaa wacyiga wax soo saarkeeda xad-dhaafka ah. Ujeeddadeennu waxay tahay, ma aha oo kaliya inaan nadaafadda goobaha magaalooyinka ka dhigno laakiin waxaa taas ka sii muhiimsan, baddeena, halka ay wax soo saarkoodu ka soo baxaan. Taa baddalkeeda, yareynta cunsurrada xun ee la xiriirta warshadaha cuntada badda.
Hadaanu nahay Makefood waxaan qaadnay talaabada ugu horeysa, si wadajir ahna, waxaan awood u leenahay inaan ku abuurno mustaqbal wanaagsan oo nadiif ah. Ku kobcinta joogtaynta iyada oo loo marayo hal-abuurnimo.
Ma aaminsani in howshani waligeed istaagi doonto. Wax waligiis waari maayaan. Waxaan u aragnaa tan safar halkii aan u socon lahayn.
Waa maxay sababta Makefood?
Makefood waxay macaamiisheenna siin doontaa adeegyo aad u wanaagsan. Waxaan gadaal ka taaganahay alaabteena waxna ka qabaneynaa wixii arrimo ah ee ka dhalan kara inta lagu guda jiro dhadhanka, rarka iyo keenista. Waxaan ku soo bandhigi doonnaa qiime aad u tartan badan weel kasta - oo la hubo.
SU'AALO SOO DIR
Haddii aad wax ka weydiiso waxyaabaha ku saabsan alaabtayada ama qiimeeyaha, fadlan ka tag macluumaadkaaga xiriirka waxaanan kula soo xiriiri doonaa 24 saacadood gudahood.
Qolka 4810, Huarun Dhismaha A, No.6 Wadada Shandong ， Qingdao ， Shiinaha
Alaabada Kulul, Khariidadda bogga, Shiinaha Qaboojiyay Tilapia GS, Qaboojiyay Tilapia dayax gooyay, Shiinaha Qaboojiyay Tilapia, Tilapia qaboojiyay GGS, Shiinaha Tilapia GS, ASC tilapia fillet,